ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသူများကို အကျဉ်းထောင်နှင့်တူသော နေရာများတွင် ထိန်း - Yangon Media Group
လန်ဒန်၊ မတ် ၁၃
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးထိန်းသိမ်းရေး စခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားသော ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာသူများအား အကျဉ်း ထောင်နှင့်တူသောနေရာများတွင် ကာလရှည်ကြာစွာ ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု မတ် ၁၃ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သော လူ့အခွင့်အရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အစီရင်ခံစာကဆိုသည်။ နိုင်ငံခြားသားများကို လန်ဒန်မြို့ အနောက်အစွန် ဟီးသရိုးလေဆိပ်အနီးရှိ အဆောက်အအုံတွင်နေထိုင်စေပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် နိုင်ငံခြားသားများသည် လေး နှစ်အထိ ထိုနေရာတွင်နေထိုင်ကြရသည်ဟု အစိုးရစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကဆိုသည်။
နိုင်ငံခြားသားများကို ထိန်းသိမ်းထား သော Harmondsworth Centre ကို လေ့လာစစ်ဆေးသူများက ”နိုင်ငံတွင်းဝင် ရောက်လာသူတွေက ဒီနေရာကနေထွက်ခွာဖို့စီစဉ်ပေမယ့် ဥပဒေရေးရာအခက်အခဲများနဲ့ ခရီးသွားလာခွင့်စာရွက်စာတမ်းများ မရှိခြင်း စသည့်အကြောင်းများကြောင့် ထို နေရာမှ မထွက်ခွာနိုင်ကြ”ဟုဆိုသည်။ ဗြိတိန်အစိုးရ၏ အကျဉ်းထောင်များ စစ် ဆေးရေးအဖွဲ့ကရေးသားခဲ့သော အစီရင်ခံစာတွင် ဗြိတိန်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အားနည်းပျက်ကွက်မှုများကြောင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုများ ကြန့်ကြာနေသည်ဟု ၎င်းအစီရင်ခံစာကဆိုသည်။
”ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရာမှာ အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိတာဟာ တချို့သူတွေကို အချိန်အကြာကြီး ထိန်းသိမ်းထားရမှုကို ဖြစ်စေတယ်”ဟု အကျဉ်းထောင်စစ်ဆေး ရေးမှူးပီတာကလစ်ကဆိုသည်။ သုံးကြိမ်ဆက်တိုက် စစ်ဆေးမှုပြု လုပ်ခဲ့ရာတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လုံခြုံရေးနှင့် လေးစားစွာဆက်ဆံမှုတွင် ပျက်ကွက်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ရက်စ်တီလာဆင်ကို ထရန့် ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်၊ စီအိုင်အေညွှန်မှူးက?
ကိုဖုန်းမော်နှင့် ကိုစိုးနိုင်အတွက် အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင် ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ် ဝင်းအတွ
‘ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကား ရုံတင်ဖို့ပြောရတာက ဇာတ်ကားတစ်ကား ရိုက်တာထက် ပိုပြီးတော့ ပင်ပန်းတယ??
အမျိုးသားပြတိုက် (နေပြည်တော်) သုံးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာ့ရိုးရာ စဉ့်ထည်
အာဏာ မရှိသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများကို ခိုင်း၍ မရဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီး ဆို
‘ဂီတသက်တမ်း နှစ် ၂ဝ ပြည့်ချိန် နောက် ၆ နှစ်အကြာမှာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်း အပုဒ် ၁ဝဝ ရှိချင်?
မန္တလေး – မြင်းခြံလမ်း ငါန်းဇွန်မြို့အဝင် ၁၄ မိုင်လမ်းဆုံမှ စတင်၍ လမ်းဘေးဝဲယာတွင် သစ်ပင် ၁၅ဝ?